Inona ny DPI? Inona no dikan'ny PPI? Inona no atao hoe fanapaha-kevitra? | Famoronana an-tserasera
Inona ny DPI? Inona no dikan'ny PPI? Inona no atao hoe fanapaha-kevitra?
Jorge Neira | | sary, dia midika hoe
Miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana, ny habetsahan'ny fotoana lanin'ny olona (amin'ny ankapobeny tanora) manoloana ny solosaina dia mitombo, miteraka fanehoan-kevitra marobe, satria azontsika jerena ny fomba afaka ny ho lasa manam-pahaizana momba ny solosaina ny olona noho ny habetsahan'ny ora mandalo ataon'izy ireo amin'ny fanaovana hetsika rehetra ao.
Mandritra izany fotoana rehetra izany, azo atao ny manondro ny fomba ahazoan'ny olona fahalalana mifandraika amin'izany faritra maro amin'ny fahalalana ao anatin'ny siansa sy ny famolavolana solosaina, mamela ny tenany hiatrika ireo olana sy filàna mipoitra eo amin'ny tontolony mifandraika amin'ireo faritra ireo.
1 Inona ny DPI sy PPI?
Inona ny DPI sy PPI?
Amin'io lafiny io, ity lahatsoratra ity dia hanolotra fampahalalana momba ny nomenclature sasany (DPI, PPI), ary koa ny fehezan-teny famahana, singa izay ilaina ho fantatra amin'ny tontolon'ny famolavolana sary, amin'ny fomba izay ahafahan'ny mpamaky mandray ny hevitr'ireo teny ireo sy ny maha-zava-dehibe ny fahalalana ny maha samy hafa ny nomenclature DPI sy PPI, izay mety hafangaro matetika tokoa.
Amin'io lafiny io dia miroso amin'ny fanolorana ireo fiheverana aseho eto izahay.
Rehefa manao pirinty isika dia azo jerena ny sarintsika fanapahan-kevitra marobe Ary araka ny fantatsika tsara, ny famahana dia misy akony lehibe amin'ny kalitaon'ny vokarinay sary. Amin'io lafiny io, ny DPI mifanaraka amin'ny haavon'ny famahana azon'ny mpanonta printy atolotra amin'ny ora fanaovana pirinty.
Amin'izany no ahafahantsika maminavina fa noho ny antony ara-toekarena dia hisy Ny karazany eo anelanelan'ny ambaratonga DPI an'ny mpanonta tsirairay. Na izany aza, toa misy ambaratonga solontenan'ny IPR ary toa izany 300 DPI mety ho ampy hamokarana sary tsara kalitao izy ireo.
Na izany aza, misy ny mpanonta printy izay afaka manana ambaratonga DPI hatramin'ny 3000 ankehitriny.
Na eo aza ny haavon'ny DPI avo afaka manome antoka antsika sary tsara kalitao, ilaina ny misoko mangina sy manaraka ny ambaratonga mety hateraky ny fitaovana amin'ny alàlan'ny fenitra, amin'izany dia midika izany fa tsy maintsy mitandrina ny mpampiasa amin'ny fanovana rehetra ataon'izy ireo amin'ny DPI an'ny mpanonta azy ireo rehefa ao anaty karoka sary avo lenta kokoa.
Ireo fepetra ireo dia mihatra amin'ny scanning ihany koa, noho io antony io dia anoroana hevitra fa rehefa atao ny asa fitiliana dia miara-miasa izy ireo Ny haavon'ny DPI tsy latsaky ny 300, amin'ny fomba ahafahan'ireo sary mampiseho haavon'ny kalitao mifandraika.
Tahaka ny misy ny fanapahan-kevitra ho an'ny sary ho an'ny fanontana sy ny fanovana, misy ihany koa ny fanapahan-kevitra ho an'ny mpanara-maso antsika.
Raha manondro ny famahana ny monitor izahay dia tokony ho raisina izany, amin'ny ankapobeny, ireo mpanara-maso dia hanolotra ny fanapahan-keviny manokana ary toy izao Ny IPR dia tokony ampifanarahana amin'ny PPI / PPP ary ireo nomenclature ireo dia ireo ambaratonga famahana izay ho hitantsika eo amin'ny mpanara-maso anay, izay hanamboarana ireo sary (na inona na inona DPI azy ireo) amin'ny fotoana anehoana azy amin'ny sarin'ny monitor.
Misy ihany koa ny fisalasalana momba ny tsy fitoviana eo amin'ny PPI sy PPP ary raha ny tena izy, ny hany mampiavaka azy roa ireo dia tsy manan-kery, satria ny voalohany dia ny fanafohezana amin'ny teny anglisy ary ny faharoa, ny fanafohezana amin'ny teny espaniola.
Ity farany dia tsy misy hafa tsy ambany noho ny isan'ny pixel mega misy sary. Amin'izany fomba izany, sary misy vahaolana 1024 × 768 mega pixel, dia azo atao ny manisa isa pixel isaky ny sary.
Amin'ny ankapobeny, ny sary aseho etsy ambony no mahazatra indrindra indrindra amin'ireo sary marobe aseho amin'ny sehatra samihafa.
Amin'izany no ahafahantsika mahafantatra izany ireo teny telo ireo dia manondro singa samihafa. Mety ho tena ilaina tokoa ny mitantana an'io fampahalalana io rehefa graphic design izy io dia momba, ary koa rehefa misy resaka pirinty sy scanning, mba hahafantarantsika ny kalitaon'ny kalitaon'ny tetik'asa solontenantsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Inona ny DPI? Inona no dikan'ny PPI? Inona no atao hoe fanapaha-kevitra?
Christian vera dia hoy izy:
Haha Misaotra Profesora !!
Valiny tamin'i Christian Vera
Izaho irery ve no nahatsikaritra fa ho an'ny lahatsoratra miresaka amin'ny olona vaovao momba ny IPR dia tsy noravan'izy ireo akory ny fanafohezana? Tena ratsy…
Mamorona mari-pankasitrahana amin'ny Adobe Premiere amin'ny tetikasanao audiovisual
Mamorona borosy Photoshop anao ary alamino ao amin'ny tranombokinao manokana